विदेशमा कमाउँदा हाई हाई, स्वदेश फर्कँदा कोही न कोही | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विदेशमा कमाउँदा हाई हाई, स्वदेश फर्कँदा कोही न कोही
चैत १०, २०७८ बिहिबार १०:३३:७ | नारायण कोइराला
समय र परिस्थिति अनुसार परदेशमा कमाउनु जानु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो देशको लागि त बाध्यता नै भएको छ ।
शासन गर्नेहरू फेरिए पनि देशले मुहार फेर्न सकेको छैन । गरिबी छ । रोजगारी छैन । बेरोजगार भएर कहिलेसम्म बस्ने ? त्यो भन्दा बरु खाडीकै बाटो तताउन बाध्य छन् युवाहरू । देशको आधा अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । परदेशमा कमाएर घर परिवार र देशकै अर्थतन्त्र धान्न परदेशीले सानो सङ्घर्ष गरेका छैनन् ।
परदेशतिर हानिएकाको अवस्था आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । स्वदेशमा रहनेहरूले पनि परदेशीबाट अनेक इच्छा र आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन् । आफन्तले परदेशीबाट आस राख्नुलाई नराम्रो पनि हैन । हर सम्भव आफ्नाले चाहेको र मागेको कुरा पूरा गर्न चाहन्छन् परदेशी पनि । तर चाहेर पनि सबैका इच्छा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन ।
देश छाडेर परदेश पुग्दा पनि आफ्नो र आफ्नाको चाहना पूरा गर्न नसक्दा मन दुःखी हुन्छ । तर मनको पीडा कसलाई सुनाउने, कसलाई भन्ने । परदेशीले आफ्नो मनको पीडा सहजै बताउन पनि सक्दैनन् ।
एकतिर कामको चाप अर्कोतिर घर परिवारको चिन्ता । सबै कुराको सन्तुलन मिलाउन कठिन हुन्छ र पनि परदेशीहरू आफूलाई सम्हालिइरहेका हुन्छन् । कमाउन भनेर देशै छाडेर परदेश पुगेपछि सम्हालिनुको अर्को विकल्प पनि हुँदैन ।
परदेशीहरूको पर्खाइमा घर आँगनमा आमाबुबा,जीवन सङ्गिनी छोराछोरीहरू हुन्छन् । सबैको माया मनमा राखेर, चिन्तालाई सन्तुष्टिमा बदल्दै बाँच्नु नै परदेशीको जीवन हो ।
परदेशको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको दुःख के हो, सुख के हो भन्ने त परदेश गएकालाई पो थाहा हुन्छ ।
परदेशमा राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष छन् । कतिपयको अवस्था एकदमै राम्रो पनि छ । कतिको सामान्य छ त कतिपय एकदमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
काम र कमाइ राम्रो हुनेलाई परदेशमा त्यति गाह्रो छैन । तर सामान्य र तल्लो तहमा काम गर्नेहरूले सोच्दै नसोचेको र कल्पनै नगरेको दुःखहरू सहन पर्छ ।
पैसा कमाउन पर्ने दबाब हुन्छ । पाएको बिदा पनि काममा नै खर्चन्छन् । तर पनि सोचेजस्तो हुँदैन।
जब परदेशमा केही वर्ष बिताएर परदेशी आफ्नो देश फर्कन्छ उसले सबैबाट केही न केही अपेक्षा त गरेकै हुन्छ ।
तर के यो अवस्थामा आफन्त, इष्टमित्र र देशको सरकार परदेशीलाई सहयोग गर्न तयार छ त ? पक्कै पनि छैन । परदेशमा कमाउँदा र जागिर छाडेर घर फर्कँदा गरिने व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक छ ।
श्रमिकलाई गर्दै आएको नोकरी छुट्दा अथवा छोड्दा आफ्नै समस्या पनि त हुन सक्छ । परदेशमा सधैँ आफैले सोचेँ जस्तो पनि त हुँदैन । यो अवस्थामा श्रमिकको हौसला बढाउने कि अरू आशा राखेर मनलाई दुःखी बनाउने ? जसरी श्रमिक मुलुक छोडेर जाँदा पैसा कमाउन गयो भनेर खुसीयाली मनाइन्छ त्यसरी नै फर्कँदा हेर्ने दृष्टिकोण पनि त राम्रो हुन आवश्यक छ ।
परदेशमा बस्दा थुप्रै स्वदेशका समस्या समाधान गर्यो होला परदेशीले । अब स्वदेशमा फर्किन चाहेको परदेशीबाट अरू आशा राखेर कहिलेसम्म सताउने ? उपदेश होइन, सबैको साथ र हौसला पायो भने परदेशमा सिकेको सीप सदुपयोग गरी आफू र देशको लागि केही गर्न सक्थ्यो होला । तर यहाँ उल्टो छ । विदेशमा कमाउँदा हाई हाई, स्वदेश फर्केपछि कोही न कोही भने झैँ हुन्छ ।
March 25, 2022, 1:23 a.m.
बहुत मनाशिव लाग्यो लेख, जहाँ यथार्थता बढि छ ।
मकै पाेल्ने दम्पती गरिब हुन् भन्नेमा दुई मत छैन तर सडकमा त्यसर...
देशका धेरै ठाउँमा अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षा, राति केही ठाउ...
इन्धन सकियाे, अब एक दिनकाे लागि मात्रै सञ्चय : श्रीलङ्का
कात्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको...
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि, पदाधिकारी टुङ्ग्याउने सम्...
नेपाललाई अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित, ओन्टारियो क्लब ५५ रन...
कसरी लिने 'क्यू आर कोड' सहितको कोभिड खोप प्रमाणपत्र ?
यी हुन् माओवादीमा थपिएका केन्द्रीय सदस्य (सूचीसहित)
रुकुम पश्चिमकाे सानीभेरीमा गाउँमै पुगेर गर्भ जाँच
तत्कालीन नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यबीच भेट
१७ डीआईजीलाई दर्ज्यानी चिह्न
युक्रेनको लिसिचान्स्क सहर सहित लुहान्स्क क्षेत्र कब्जा गरेको रुसक...
बढ्दो व्यापार घाटाबाट राष्ट्रपति चिन्तित
चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता/कार्यकर्तामाथि छानबिन गर्न एमालेले...
कमरेड शब्द मलाई असाध्यै मनपर्छ : कमल थापा